mars 2018 · Page 6 de 6 · déliremadagascar
Resaka lalàm-pifidianana : Mampiakam-peo ny vehivavy MFM
Délire Madagascar: Rasoaniaina Malalatiana Filohan’ny vehivavy MFM, mandeha ny resaka fa ny Lalànan’ny fifidianana ankehitriny dia toa mampiferinaina an-dry zareo MAGRO fa tia hoe tsy mahazo milatsaka ny Dadany. Ahoana ny hevitrao manodidina an’izay tompoko? Continuer la lecture →
Socio-eco	 4 mars 2018 R Nirina
Sekoly Fitahiana Antohomadinika : Nakatona aloha.
Ity no tonga amin’ny fitenenana hoe : « ny lehibe no miady ka ny ankizy no voaporiporitra ». Tao aorian’ny fanalana ny mpitandrina ANDRIANANTENAINA Alain De Néri ao amin’ny fiangonana METM Zoara famonjena Antohomadinika izay tsy nahomby sy ny nametrahan’ny foiben’ny METM « Misiona evanjelika Teratany eto Madagasikara » ny tale vaovao ao amin’ny sekoly fitahiana, tsy maintsy nakatona ny sekoly amin’ny fotoana voafetra. Continuer la lecture →
Fitsaboana avo lenta mampitombo haingana ny zaza tsy tonga volana sy tsy ampy lanja ny “maman kangourou”. Mihoatra lavitra ny vokatry ny fitsaboana amin’ny alalan’ny « couveuse » ity fitsaboana amin’ny alalan’ny hafanan’ny reny ity. Continuer la lecture →
SALON DES ÉTUDES INTERNATIONALES : Andro voalohany, liana dia liana ny mpianatra
Nisokatra androany ny « salon des études internationales » natao hampahafantarana ireo mpianatra ny dingana atao raha hianatra any ivelany. Continuer la lecture →